SwiftKey Beta waxay ku dareysaa hab aan qarsoodi ahayn, toobiyeyaal qoraal iyo wixii intaa ka badan | Androidsis
SwiftKey ayaa noqotay ugu fiican keyboard Android haddii qofku raadinayo beddel OS-ga rasmiga ah ee aaladaha mobilada Google. Cusbooneysiintaada joogtada ah, habeyn weyn iyo waxqabad aad u fiican ayaa ka dhigtay barnaamijka kumbuyuutarka tusaalaha si aad u fiirsato haddii aad rabto inaad bilowdo kumbuyuutar kale oo kuu gaar ah kuwa horey u jiray.
Shalay waxaa lagu cusbooneysiiyay nooc cusub oo la socda Habka Qarsoon, toobiyeyaal si loo balaadhiyo qoraalka, iyo waxyaabo kaloo badan. Wax kasta oo aad ka heli doonto cusbooneysiinta, qaabka qarsoodiga ah ayaa muuqda, kaas oo bixiya ikhtiyaarka si kumbuyuutarka uusan u xusuusan wax kasta oo aad qorto oo ay ku habboon tahay wadahadalladaas gaarka ah. Cusboonaanta kale ee weyn waa taageerada ballaadhinta qoraalka, taas oo kaa caawin doonta inaad keydiso furayaal fara badan.
Tani waa liiska isbeddelada oo buuxa laga bilaabo Swiftkey beta:
Qaabababka loo qoro qoraalka
Ka beddel qaabka Latinka marka aad ku sugan tahay goob ay tahay inaad gasho emaylka ama lambarka sirta ah
Dhammaan furayaasha falaarta waxaa lagu heli karaa qaabka ugu weyn ee kiniiniyada
Waxaa lagu hagaajiyay qodob hoosta ka xariiq ah qaar ka mid ah luqadaha maxalliga ah iyo Android N
Kiiboodh gacmeed ayaa loo isticmaali karaa Android N marka kumbuyuutar jirka ah ama Bluetooth uu ku xiran yahay
Si aad u hesho habka qarsoodi waa inaad sameysaa ka soo deg deg deg ah kumbuyuutarka Markay firfircoon tahay, waxaad lahaan doontaa duluc mugdi ah oo muujinaysa muuqaal ahaan inaad ku jirto qaabkaas. Awoodda weyn ee qaabkani waa in kumbuyuutarka uusan baran doonin ereyo cusub ama uusan keydin doonin xogtaada.
Waxyaabaha kale ee cusub waa toobiyeyaasha qoraalka la ballaadhiyay ee laga heli karo tabka "sabuuradda". Waxaad sameysaa a dhagsii «Inbadan» gudaha «My clipboard» oo wuxuu kuu tilmaamayaa shaashadda weyn ee qaabeynta. Hadda waxaad u baahan tahay oo keliya inaad doorato "Add clip cusub" oo waad geli kartaa qoraalka iyo habka loo soo gaabiyo si ugu dambeyn loo badbaadiyo. Markaad qori doontid toobiye, talo soo jeedinta ugu weyni waxay noqon doontaa qoraalka aad soo gashay, waxaad riixaysaa booska waana la galiyay
Ugu dambeyntiina, waxaan la harnay kuwa furaha fallaarta qaab kiniin ah. Astaamahan oo dhan waxay gaari doonaan nooca ugu dambeeya, laakiin waxaad ka tijaabin kartaa beta-ka ee widget-ka hoose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » SwiftKey Beta waa la cusbooneysiiyay iyadoo la balaariyay qoraallada gaagaaban, qaabka aan laqarin iyo fallaaraha qaabka kiniinka
Fikradda casriga ee casriga ah ee loo yaqaan 'Xiaomi' ayaa soo daatay
Samsung waxay siisaa $ 100 dhibco kuwa daacad u ah astaanta